[Fahatsiarovana ] 29 Janoary, 2015 00:24
Izao indray no iarahabako anao :
Mitsingerina androany ny nahaterahanao.
Izaho anefa tsy mahatakatra
Fa ny atolotro izao
Dia ny hira ho anao ♫ ♫
Ps : ho an'ilay namako any an-tany lavitra
[Fanajana ] 26 Janoary, 2015 18:22
Soraty amin'ny rindrina...
Ho fanajana sy fiondrehana eo anoloan'ny andrarezina lavo ity blaogiko androany ity. Nandrotsirotsy ny fahazazako, sy ny hatanorako ka hatramin' izao ankehitriny izao ny hiran'i Demis Roussos. Isan'ny tena tiako i "on écrit sur les murs"
On écrit sur les murs à l 'encre de nos veines,
Dia nampandrevirevy hatramizay mihitsy koa i "Loin des yeux loin des coeurs"
[Hira ] 22 Janoary, 2015 08:16
Tranobongo : Kamba kely sy Zopanage
Rehefa miteny hoe Zopanage dia "aty an-tany lavitra aho no mihira ho an'ialahy" no ao am-bavan'ny rehetra - hirampirenena, loll. Dia manao dokambarotra kely aho eto izany (ho an'ny roa tonta) hoe raha te-hahalala ny hiran'izy ireo ankoatran'ny "Namana" ianao dia midira ao amin'ny RadioVazoGasy mandahatra sy mihaino (sady misy Tononkira ireo an - héhé).
Hanontany tena ny mpamaky hoe inona ny hidiran'i Kamba kely amin'ny tarika Zopanage. Tena tsy misy idirany tokoa raha tsy hoe isaky ny mihaino ity hira "Trano bongo" ity aho dia manembona foana an'i Kamba kely.
Taona 2008 no nifandrimbonana teto amin'ny blaogasifera ny fitsaboana an'i Kamba kely. Azonao jerena ATO ny tantarany.
Saingy indrisy, indramiko ny blaogin'i avylavitra hitantara azy
Na izany aza, tsy vita teo ny adidy fa noraisin'ny Fikambanana TetezanaOnlus an-tsoroka ny fanampiana ny iray tam-po aminy eo amin'ny fianarana. Isan'ny fangatahan'ny reniny koa ny hanamboarana ny trano fonenan'izy ireo saingy mbola somary nanahirana iny hatreto satria tsy afaka natsangana amin'ny tany tsy misy kadasitra ny rindrina na dia hoe efatra fotsiny ihany aza.
Ka eto no mampifandray ity hiran'ny Zopanage ity sy i Kamba kely. Satria io trano bongo nataoko amin'ny horonantsary io no mba trano fonenan'izy mianakavy, ary ireo zaza ireo no iray tam-po aminy (ilay vavikely iray io no kambana aminy). Isaky ny mihaino ity hira ity aho dia ireo sary ireo no ato an-dohako na dia maro aza ny sarina tranobongo.
Tiako fotsiny ny nanao izay fanamarihana izay satria hitako nahasarika sy nanohina olona maro ilay hira. Aingam-panahy be teo am-piketrehana lay horonana.
Embona sy hanina...